स्वास्थ Archives - Page9of 18 - Dna Nepal
होसियार ! पोखरामा डेंगु रोगको प्रकोप १० कार्तिक २०७५, शनिबार ०५:०५
पोखरा, कार्तिक १० । पोखरामा डेंगु रोग संक्रमितको संख्या बढेको छ । असोज यता पोखराका विभिन्न अस्तपतालमा उपचार गर्न पुगेका मध्ये २२ जनामा डेंगुको संक्रमण भेटिएको छ । पोखराका गण्डकी मेडिकल कलेज, चरक मेमोरियल र फेवासिटी अस्पतालमा परिक्षणमा आएका २२..
हरे यस्तो पनि दुख ! शिरदेखि पैतालासम्म मासुका पोका, छटपटिँदै बित्छ हरेक रात
जनकपुरधाम, कार्तिक १० । ‘भनिन्छ, दैव दाहिना नभए कसको के लाग्छ र ! दैवको देन होस् वा मेरो कर्मको फल, जे छ, त्यो त छँदै छ तर मैले जस्तो पीडा अरू कसैले भोग्न नपरोस् भन्ने भगवान्सँग म कामना गर्छु । यो निको नहुने रोगको भुमरीमा अथाह दुःख र कष्टसाथ जिउने मैले..
विहे नभएका महिलालाई स्तन क्यान्सरको उच्च जोखिम, कसरी बच्ने ? ९ कार्तिक २०७५, शुक्रबार १२:३३
एजेन्सी, कार्तिक ९ । शरीरमा अनियन्त्रित रूपमा वृद्धि भएका कोशिकाहरू समयमै नियन्त्रण नगर्दा क्यान्सर हुने गर्छ । क्यान्सर शरीरको कुनै पनि भागमा हुन सक्छ । पछिल्लो समयमा स्तन क्यान्सरका बिरामी बढ्न थालेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । भक्तपुर..
१२ वर्षमै आमा बन्दैछिन नेपालकी एक बालिका ६ कार्तिक २०७५, मंगलवार १६:३७
हेटौंडा, कार्तिक ६ । आमाबुबाको काखमा लडीबुडी गर्नुपर्ने उमेर । हाँसखेल र रमाइलो गर्नुपर्ने उमेर । चन्चल अनी साथीभाईसँग यताउती पुगेर रमाइलो गर्नुपर्ने र पढ्नुपर्ने उमेर । तर मकवानपुरको राक्सिराङ–३ की १२ वर्षीया बालिका गंगा चेपाङको पेटमा सात..
मर्दी खानेपानी आयोजना सुरु गर्ने सरकारको निर्णय, पोखरेलीलाई सहज हुने २३ आश्विन २०७५, मंगलवार ११:२७
पोखरा, असोज २३ । नेपाल खानेपानी संस्थानले जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा पोखराको मर्दी खोलाको पानीलाई प्रशोधन गरी वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । जाइकाको चार अर्ब ८० करोडको लागतमा आयोजना तयार गर्न लागिएको हो । खानेपानीमन्त्री..
गर्भपतनमा कास्की नेपालकै पहिलो १५ आश्विन २०७५, सोमबार ०२:४०
पोखरा, असोज १५ । नेपालमा २०६६ सालभन्दा अघिसम्म गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको थिएन । पछि सरकारले समेत गर्भपतनलाई मान्यता दिएर सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामार्फत् यसले वैधानिकता पायो । विभिन्न ठाउँमा सुरक्षित गर्भपतनका मान्यता प्राप्त..
तपाईंकी श्रीमती रिसाईरहन्छिन् ? (यी कुरामा ध्यान दिनुस्) १३ आश्विन २०७५, शनिबार १४:११
एजेन्सी, असोज १३ । जुन कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यस्ता कुराहरुलाई मतलब नै नगर्ने बानी सम्भवतः श्रीमतीहरुलाई आफ्नो श्रीमानको सबैभन्दा नराम्रो बानी लाग्नसक्छ । यस्ता साना–साना कुराले विवाहित जोडिमा झगडा पैदा हुनसक्छ । यदि तपाईंको..
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पतालका कर्मचारी तलब नपाएपछि काम छोडेर हड्तालमा ११ आश्विन २०७५, बिहीबार १६:०७
पोखरा, असोज ११ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीले तलब नपाएपछि काम छाडेर बिहीबारदेखि हड्तालमा उत्रिएका छन् । प्रशासनले आफूहरुमाथि ज्यादति गरेको साथै कार्यरत करार कर्मचारीले ३ महिनादेखि तलब नपाएको कारण..
पोखरामा खोरेतको प्रकोप–पशु ओसारपसार गर्न रोक ७ आश्विन २०७५, आईतवार १५:१०
पोखरा, असोज ७ । पोखरामा खोरेत रोगको प्रकोप देखिएको छ । विभिन्न ठाउँहरुमा खोरेत रोग देखा परेपछि महानगरले पोखराभित्र पशुबस्तु आयात र निर्यातमा रोक लगाएको छ । आईतबार सूचना जारी गरी रोगको प्रकोप निर्मुल नभएसम्म पशुबस्तु आयात निर्यात नगर्न आग्रह..
लेखनाथ सामुदायिक अस्पतालमा तोडफोड र चोरी ३० भाद्र २०७५, शनिबार ०९:४२
पोखरा, भदौ ३० । पोखरा ३० मोहोरियामा रहेको लेखनाथ सामुदायिक लायन्स अस्पतालमा तोडफोड भएको छ । मोहरिया, देउराली खोला वस्ने वावुराज घले र सुरज थापाले तोडफोड गरेको अस्पतालले जनाएको छ । ‘पहिले केही औषधी मागेका थिए । हामीले दिन मिल्दैन भनेपछि एकासी..